apple ipad pro (2021) umhla wokukhutshwa, ixabiso, amanqaku kunye neendaba
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-Apple iPad Pro (2021) yokukhutshwa komhla, amaxabiso, amanqaku kunye neendaba
I-Apple iPad Pro (2021) yokukhutshwa komhla, amaxabiso, amanqaku kunye neendaba
Entsha enomdla I-M1-inikwe amandla i-2021 iPad Pro yenziwa yaseburhulumenteni ngo-Epreli 20. Ukuba unomdla wokufunda ngayo kwaye uyithenge, awunandawo kwindawo elungileyo! Nantsi yonke into onokufuna ukuyazi malunga nayo apile Iipilisi ezintsha nezona zinamandla ukuza kuthi ga ngoku.
I-iPad Pro 2021 (12.9-intshi) uphononongo
I-iPad Pro 2021 (11-intshi) uphononongo
Ixabiso elitsha le-iPad Pro (2021), uku-odola kwangaphambili, ezona ntengiso zibalaseleyo
Eyona meko ilungileyo ye-iPad Pro (2021) yeekhibhodi
Eyona iPad Pro (2021) ikhusela kakhulu
Apple iPad Pro (2021) umhla wokukhutshwa
Ngomhla wama-21, 2021
Ekuqaleni, imithombo emininzi eyaziwayo yayibanga ukuba i-2021 IPad Pro inokuphuma 'kwangoko ngo-Epreli' , eyayibambe iyinyani. I-Apple hasn & apos; azingqinelani nemihla yayo yokukhutshwa kwePad Pro njengoko injalo ngeePhones, kodwa uqikelelo beluchanekile kwaye i-2021 iPad Pro yabhengezwa ngo-Epreli 20, 2021.
Uku-odola kwangaphambili kwe-M1 iPad Pro entsha kwaqala ngo-Epreli 30, ngelixa ukuhambisa kwaqala ngoMeyi 21, 2021. Nceda ujonge Ixabiso le-Pro Pro 2021, uku-odola kwangaphambili, ezona ntengiso zibalaseleyo ukuba ufuna uncedo xa ukhetha ukuthenga i-iPad Pro (2021). Ngenye indlela, ungayifumana kwaba bathengisi:
I-Apple iPad Pro 12.9-intshi (2021) Jonga ixabiso Thenga kwiAmazon $ 109999 Thenga kwiBestBuy $ 1099 Thenga kwi-B & H Photo
I-Apple iPad Pro 11-intshi (2021) $ 79999 Thenga kwiBestBuy Jonga ixabiso Thenga kwiAmazon $ 799 Thenga kwiApple
Ixabiso leApple iPad Pro (2021)
Inkqubo entsha ye-M1 ene-iPad Pro iza ngobukhulu obubini kunye nexabiso lesiseko ngalinye ngolu hlobo lulandelayo:
I-Pro-intshi ye-11 intshi iPad Pro iqala kwi- $ 799 (iWi-Fi) kunye ne- $ 999 (iWi-Fi + yeselula)
IPro Pro ye-12.9-intshi iqala kwi $ 1,099 (iWi-Fi) kunye ne- $ 1,299 (iWi-Fi + yeselula)
I-2021 i-iPad Pro kunye ne-apos; zokugcina iinketho ziqala nge-128GB kwaye zibandakanya i-256GB, 512GB, 1TB, kunye ne-2TB. Njengesiqhelo, akukho sitoreji sinwenwayo nge-microSD.
Uyilo lwe-Apple iPad Pro (2021) kunye nokubonisa
I-2021 ye-IP Pro ayitshintshi kwi-predecessor yayo ngokwendlela yoyilo, kodwa iza ngombala omtsha-omhlophe, ecaleni kukhetho olumnyama. Inika ukwakhiwa kwale mihla kunye nee-bezels ezimnyama ezilinganayo ezijikeleze umboniso. Iphinda iza nezithethi ze-quad, ezimbini kwicala ngalinye, i-USB Type-C port (ngoku exhasa iThunderbolt), ikhibhodi kunye nezihlanganisi zePensile ye-Apple, ngokubonakalayo imodyuli yekhamera efanayo kunye neekhamera ezimbini eziphuculweyo, kunye nesenzisi esifanayo se-LiDAR.
Ngelixa i-intshi ye-11 intshi ye-2021 Pro Pro isasebenzisa itekhnoloji efanayo yeLiquid Retina njengonyaka ophelileyo, imidlalo entsha ye-2021 iPad Pro 12.9-intshi yemidlalo yeXDR Liquid Retina ebonisa ubuchwepheshe be-mini-LED. Obu buchwephesha butsha buphucula umboniso kunye ne-apos; umahluko wokukhanya kunye nokuqaqamba, kunye nokuvelisa kwakhona abamnyama anzulu, okwenza ukuba ukhuphiswano olusondeleyo kwi-OLED. Yiprojekti yokuphuculwa komboniso obalulekileyo ngaphezulu kwazo naziphi na iimodeli zangaphambili ze-iPad. Zombini iimodeli zePad Pro (i-intshi eyi-11 kunye ne-intshi eyi-12.9-intshi) inenqanaba lokuhlaziya elincomekayo le-120Hz njengabo bangaphambili.
Njengobungakanani be-Pro Pro ye-iPad & apos ayitshintshi ukusuka kunyaka ophelileyo, iyahambelana nazo zombini ezitsha kunye nezinye zangaphambili Amatyala e-Pro Pro kunye nezixhobo, ngakumbi ikhibhodi yomlingo kunye nefolio yekhibhodi ebalaseleyo. I-2021 i-iPad Pro ikwaxhasa i-Apple Ipensile yesi-2 kwaye inendawo yokumazibuthe efana neminyaka edlulileyo kunye neapos Pro Pro kunye IPad Air 4 .
Ikhamera ye-Apple iPad Pro (2021)
Imodyuli yekhamera yangemva kwe-2021 ye-iPad kunye neapos; ngoku ine-16MP yekhamera ebanzi kunye nekhamera ephambili elindelweyo, inzwa yeLiDAR kunye neflash. Ithebhulethi & iiapos zekhamera yangaphambili iphinde yaphuculwa yaya kwi-12MP kwaye iza nenqaku elitsha lesoftware ebizwa ngokuba liZiko leNqanaba.
Isigaba seZiko siphucula amava omhlangano wevidiyo ngokugxininisa kubo kwaye abagcine embindini wesakhelo nokuba bahambahamba. Oku kwenzelwa umbulelo kwikhamera yeFaceTime ibanzi ngokwaneleyo ukuba ibambe indawo enkulu yokubukela (i-122 degrees), yiyo loo nto isenokubona kwaye izame ukugxila kumsebenzisi nokuba sele beshiye iziko lesakhelo.
Ukucaciswa kweApple iPad Pro (2021)
I-11-intshi 120Hz ProMotion LCD / 12.9-intshi 120Hz Ulwelo Retina XDR (Mini-LED) bonisa
I-Apple M1 chip
Ukuqala kwi-8GB ye-RAM, ukuya kuthi ga kwi-16GB ye-RAM
Ikhamera ephambili ye-12MP, ikhamera ye-10MP ebanzi ye-ultra-wide (125 ° FOV), isivamvo seLiDAR, ukukhanya
Ikhamera ye-12MP ye-TrueDepth yeselfie eneNkxaso yeNqanaba leZiko
Uhlobo lwe-C yohlobo C kunye neThunderbolt
Izithethi zestereo (ezimbini kwicala ngalinye, ezine zizonke)
Unxibelelwano lwe5G (mmWave e-US)
Isoftware ka-Apple iPad Pro (2021)
Iimodeli ze-2021 ze-Pro Pro ziza ne-iPadOS 14 ngaphandle kwebhokisi, ukuze iphinde ihlaziywe IPad 15 , eneempawu eziphuculweyo zemisebenzi emininzi kunye nesikhangeli sewebhu seSafari. Ngaphambili, i-iPadOS 14 yazise iiwijethi zesikrini esingcono kuzo zonke ii-iPads eziyixhasayo, kunye nenqaku elitsha elibalulekileyo elibizwa ngokuba yiScribble. Ukuba umsebenzisi ungumnini wepensile ye-Apple (2-gen, kwimeko ye-iPad Pro), iScribble ibavumela ukuba babhale ngesandla nakweyiphi na intsimi yokubhala ngePensile uqobo, endaweni yokuxhomekeka kwikhibhodi ekwisikrini. Ke, abasebenzisi be-iPad ngoku banokusebenzisa Ipensile yabo ye-Apple phantse kuyo nayiphi na into abanqwenela ukuyenza kwi-iPad.
Nge-iPadOS 14 kuye kwafika amanqaku amatsha okhuseleko, awona abalulekileyo ajikeleze isiphequluli se-intanethi ye-Safari ye-iPad. ISafari ngoku inokwazisa umsebenzisi ngamagama agqithisiweyo abuthathaka, ngelixa iVenkile yeApple ngoku ibonisa ulwazi lwangasese kumsebenzisi, ezinje ngeemvume ezifunwa lusetyenziso, ngaphambi kokuzikhuphela. Utshintsho oluncinci lomdibaniso lwenziwe kwii -apps ezakhelweyo ngaphakathi ezinje ngeeFayile, ukwamkela ngcono ukusetyenziswa kweemenyu ezisecaleni zokuhamba okungcono kwiscreen esikhulu, yiyo loo nto yenza ukuba i-iPad izive ifana nekhompyuter, endaweni ye-iPhone enkulu.
I-Apple iPad Pro 11-intshi (2021) eneenkcukacha ezichaziweyo
I-600 cd / m2 (ubusuku)
Ireyithi yokuhlaziya ye-120Hz, ukutyabeka kwe-Oleophobic, isivamvo sokukhanya kweAmbient
I-Octa-core, 3100 MHz, 5 nm
I-Apple 8-engundoqo ye-GPU
Ilungu le-12 MP (PDAF)
MP eyi-10 (ebanzi)
Ukusondeza okubonakalayo: 2.0x; Ubungakanani besithuba: F2.4
Ukuqonda ubunzulu be-TOF 3D (ulwazi olunzulu)
3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (HD epheleleyo) (240 fps), 1280x720 (HD) (30 fps)
Ividiyo ephelelwe lixesha
Ilungu le-12 MP
9.75 x 7.03 x 0.23 intshi (247.6 x 178.5 x 5.9 mm)
16.44 oz (466.0 g)
Umva: IAluminiyam; Isakhelo: Aluminium
Ukuvulwa kobuso be-3D Jonga i-Apple iPad Pro Pro ye-intshi ye-11 intshi (2021) ukuthelekisa okanye ukuthelekisa kwezinye iifowuni usebenzisa isixhobo sethu sokuthelekisa.
I-Apple iPad Pro 12.9-intshi (2021) eneenkcukacha ezichaziweyo
I-Apple iPad Pro 12.9-intshi (2021)
I-1600 cd / m2 (ubusuku)
Ireyithi yokuhlaziya ye-120Hz, inkxaso ye-HDR, ukutyabeka kwe-Oleophobic, isivamvo sokukhanya kweAmbient
I-11.05 x 8.46 x 0.25 intshi (280.6 x 214.9 x 6.4 mm)
I-24.06 oz (682.0 g)
Ukuvulwa kobuso be3D Jonga iApple iPad Pro epheleleyo ye-12.9-intshi (2021) yokuthelekisa okanye ukuthelekisa kwezinye iifowuni usebenzisa isixhobo sethu sokuthelekisa.
eyona moto x iimeko ezimsulwa
Yintoni iapos entsha kwiNetflix nakwiHBO kaNovemba 2019: 'Ukukhutshwa kweIreland' kunye nesiphelo seSilicon Valley
Iifowuni eziphambili kwiBoost Mobile (2018)
Lifeproof Frē Ityala lebhetri yamandla yovavanyo lwe-iPhone 6
Uyidibanisa njani iApple Watch yakho ne-iPhone yakho entsha
Ngaba kukhuselekile ukuphatha iifowuni epokothweni? I-Apple kunye ne-Samsung babethwa ngetyala le-RF
I-Sony Xperia XZ yePrimiyamu vs i-Z5 yeNkulumbuso: ngaba kufuneka uhlaziye?